प्रधानमन्त्रीले भने -सहकारी पनि युनिटीजस्तै हो ? ::netpatrika
प्रधानमन्त्रीले भने -सहकारी पनि युनिटीजस्तै हो ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ठगी गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई कारवाही गर्ने बताएका छन् । शुक्रबार समस्याग्रस्त सहकारीका लागि जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै सहकारीमन्त्री समेत रहेका कोइरालाले यस्तो बताएका हुन् ।
आयोगको सुझावप्रति सरकार गंभिर रहेको बताउँदै ‘ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई सरकारले कारवाही गरेरै छाड्ने’ बचा गरे ।
सहकारीमा कस्तो प्रकारको ठगी भएको भन्ने बारेमा कोइरालाले जिज्ञासा राखेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले सहकारी पनि युनिटी जस्तै हो ? भन्नुभयो ।’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उदृत गर्दै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले भने -’ हामीले सहकारीको ठगी युनिटीभन्दा खतरापूर्ण भएको जानकारी गरायौं, उहाँले सरकारले कारवाही गरेरै छाड्छ भन्नुभयो ।’
सरकारले गत कात्तिक २७ गते विशेष अदालतका पूर्व न्यायधीस कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।
नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएको ठहर गर्दै आयोगले नेपालमा विद्यमान कानूनहरुमध्ये सर्वाधिक सजाय भएको सहकारी कानूनी व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ ।
आयोगले ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्ने सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई विजो गरिवानासहित १५ देखि २० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सिफारिक गरेको छ । विद्यमान सहकारी ऐनमा सहकारी सञ्चालकलाई अधिकतम १५ सय रुपैयाँ जरिमाना गर्न सक्ने मात्रै व्यवस्था छ ।
‘कमजोर कानूनको आडमा ठगी गर्ने मनसाय राखेर सहकारी संस्था सञ्चालन गरेको देखियो’ आयोगका सदस्य शुसीलराम माथेमाले भने भने -’ठगी नियन्त्रण गर्न विगो जरिमाना र जेल सजाय दुवैको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका छौं ।’
आयोगले सिफारिस गरेको कानून हाल नेपालमा प्रचलनमा रहेका वित्तीय अपराधसम्बन्धी कानून भन्दा धेरै कडा हो । विद्यमान वित्तीय क्षेत्रको सबैभन्दा कडा ऐन बैंकिङ कसूर ऐन भए पनि यसमा ४ वर्ष जेल सजाय भुक्तानी गरेपछि जरिवाना तिर्नुपर्दैन ।
सहकारी प्रवर्द्धन समिति’ गठनको प्रस्ताब
आयोगले सर्वाधिकार सम्पन्न सहकारी प्रवर्द्धन समित गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । उक्त समितिको अध्यक्ष सहकारी मन्त्री रहनेछन् भने सहकारी सचिव, सहसचिव, राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर, सहकारी रजिष्ट्रार, सहकारी संघको प्रतिनिधि, र विज्ञ सदस्य रहनेछन् ।
समितिको बैठक कम्तीमा महिनामा एक पटक बस्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ । समितिले सहकारी क्षेत्रको सिद्धान्तको अन्त्िम व्याख्या गर्नेछ । यसले सहकारी नियमावली र मापदण्ड बनाउनुका साथै सरोकारवालाहरुलाई आदेश दिन सक्ने छ। समितिको आदेश कानूनसरह हुने छ ।
नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा
आयोगले नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा पनि बुझाएको छ । जसमा कडा कानूनी प्रावधान राखिएको छ । नयाँ सहकारी दर्तामा रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ । एेनमा नेपालमा विद्ममान रहेका कानूनहरूमध्ये सबैभन्दा कडा कानूनको व्यवस्था गरिएको कार्कीले जानकारी दिए ।
५० करोडमाथि कारोबारलाई ३ वर्ष राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने
५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाहरुको नियमन गर्न ३ वर्षका लागि राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘राष्ट्र बैंकले संस्थाहरुलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउने छ’ आयोगका सदस्य सीताराम उप्रतीले भने ।
७५ वटै जिल्लामा शक्तिसम्पन्न डिभिजन कार्यालय
आयोगले ७५ वटै जिल्लामा अधिकारसहितको डिभिजन सहकारी कार्यालय स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । संस्थाहरुको नियमनका लागि डिभिजन सहकारी कार्यालय आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका थिए । १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिमानाको फैसला डिभिजन सहकारी कार्यालयको प्रमुखले गर्नेछ ।